mercredi, 07 octobre 2015 11:38
SEKRIMA : Hanao fanambarana
Hanao fanamabarana momba ny "Asa mendrika ho an'ny rehetra" ny sendika SEKRIMA anio alarobia 07 oktobra amin'ny 11 ora sy sasany, ao amin’ny foibeny ao Behoririka.
mardi, 06 octobre 2015 15:00
Fiadidiana ny tananan’Antsirabe: Tafapetraka ireo ekipan’ny Ben’ny tanàna
Nanomboka nandray ny asany amin’ny maha Ben’ny tanàna azy Razanakolona Paul ny talata 06 Oktobra 2015. Efa tafapetraka ny ampahany amin’ireo mpiara-miasa aminy ka mbola notazoniny hiara-hiasa aminy ny lefitra faharoan’ny Delegasiona manokana teo aloha, nataony lefitra faharoa. Misahana ny asan’ny Sekretera jeneraly ny filohan’ny delegasiona manokana. Efa tafapetraka koa ny talen’ny kabinetra sy ny lefitra fahatelo. Mbola tsy misy kosa ny lefitra voalohany, izay nambaran’ny Ben’ny tanana fa ho Administratera sivily no hisahana izany mba hitohizan’ny asa avy hatrany.
mardi, 06 octobre 2015 11:07
Mahabo – Menabe : Dahalo roa maty notifirin’ny Polisy raha saika hitsoaka
Dahalo malaza ratsy amin’ny halatr’omby sy vaky trano ao Mahabo izy roa lahy ireto no tra-tehaky ny polisy rehefa nanaovana vela-pandrika taorian’ny fanomezam-baovao azon’ny Polisy. Nanoro ny namany izy ireo, saingy teny an-dalana hisambotra ireo nambara fa namany ireo no nikasa handositra ireto jiolahy ireto ka ny tifitry ny polisy no tonga aloha, ary dia maty tsy tra-drano ireo dahalo roa ireo. Nitangorona nijery azy ireo ny olona io maraina io.
Doro tanety Boeny
mardi, 06 octobre 2015 09:09
Boeny : Mirongatra ny doro tanety
Midorehitra mena ny tanety rehefa amin'ny alina, mainty rehefa antoandro. Izay no sary hita manaraka ny lalam-pirenena faha-4, amin’ny tapany avaratra andrefan’ny Faritra Analamanga, mahazo an’i Betsiboka mipaka any Boeny ankehitriny. Tranga izay mety mbola hirongatra mandra-pirotsaky ny orana.
lundi, 05 octobre 2015 23:25
Kaominina Ambatondrazaka : Raikitra ny famindram-pahefana
Haroso ho amin’ny alarobia izao ny famindram-pahefana eo amin’ny Ben’ny tanàna vaovao Rafidimanana Louis Félicité sy ny Ben’ny tanàna mpisolo toerana Randriamanampisoa Honoré. Asa miandry ny ben’ny tanànana vaovao ny fanohizana ny fanadiovana ny tanàna sy ny fanatsarana ny lalana mampifandray ireo Fokontany sivy. Manamarika ny Ben’ny tanàna vaovao fa na dia avy amin’ny antoko TIM aza ny tenany dia vonona hiara-hiasa amin’ny ankolafy samihafa mba hampandrosoana an’Ambatondrazaka.
Amperin’asa ny Ben’ny tanàna Razanakolona Paul
lundi, 05 octobre 2015 23:14
Kaominina Antsirabe Renivohitra : Nandova trosa 163.000.005 Ariary ny Ben’ny tanàna vaovao
Tontosa tamim-pirahalahiana ny alatsinainy tolakandro ny famindram-pahefana teo amin’ny PDS-n’Antsirabe Razafindrainony Beryl sy ny Ben’ny tanàna voafidy, Razanakolona Andriamasitera Paul. Fantatra nandritra izany fa 163.000.005 Ariary ny trosan’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny Kaominina ny mbola tsy voaloa. Nilaza ny Ben’ny tanàna Razanakolona Paul fa tapitra teo ny resaka politika. Vonona ny hiara-hiasa amin’ny rehetra ny tenany. Nanatrika ity famindram-pahefana ity ny kandidà 5 nifaninana taminy. Tsy tazana kosa ny TIM sy ny HVM.
lundi, 05 octobre 2015 22:48
Farahalana - Sambava : Trano nianjeran’ny hazo namono olona iray
Fototra manga no nidaraboka tamina trano iray ny alatsinainy tolakandro tao Farahalana – Sambava. Tampoka no nisehoan’ny loza. Vokany, lehilahy iray maty tsy tra-drano, roa maratra mbola tsaboina any amin’ny hopitaly, iray nieren-doza. Tovolahy avy any Andapa tonga hiotra no anton-diany tao amin’ity trano ity no namoy ny ainy.
Harold aéroport Antalaha
samedi, 03 octobre 2015 18:37
Seranam-piaramanidina Antalaha : Mandrahona hitokona ny mpiasa
Mitaraina ny mpiasan’ny orinasa Harold Aéroport mitantana ny seranam-piaramanidina Antalaha fa telo volana izy ireo izao no tsy nahazo karama. Mikasa hanao fitokonana izy ireo amin’ny herinandro ho avy io raha tsy mivaha ny olana.
samedi, 03 octobre 2015 10:09
Mifandona ny samy ngeza any Syrie amin'izao
Vaky nandositra ny F15 efatra nentin'ny tafika israelianina vao norahonan'ny tafika rosianina, iny izy niditra ny habakabaky Syrie. Ny amerikanina dia mandrahona ny tsy hisian'ny ady lehibe fahatelo sy ny ady mangatsiaka eo aminy sy ny Rosianina. Poutine etsy ankilany dia mandrangaranga amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika fa tsy anjaran'ny Amerikanina no hanendry izay mpitondra any Syrie. Petrole sy fifehezana ny Moyen Orient avokoa izany.
vendredi, 02 octobre 2015 22:52
Toliara : "sardine" am-bifotsy lany daty namono olona
Telo lahy no namoy ny ainy, maty tamin'ny alarobia 30 septambra ny roa, raha omaly naraina kosa ny fanintelony. Niara-nisotro tokoa izy ireo ary "sardine" efa lany daty no natao tsaky. Tsy nahatsiaro tena avy hatrany ny iray taorian’ny fihinanana an’io, ary namoy ny ainy fotoana fohy taty aoriana. Tafakatra telo ireo maty vokatr’ity ny fanapoizinana ara-tsakafo ity.